Malunga nathi -Chinatown Grain Machinery Co., Ltd.
IChinatown Grain Machinery Co, Ltd. ibonelela ngoomatshini abagqibeleleyo kunye nenkonzo yokuvelisa ukutya kunye neefektri zokulungisa ukutya okuziinkozo, ezinje ngomgubo wengqolowa, umzi-mveliso wefula kunye nomzi mveliso wokulungisa irayisi. Ukuza kuthi ga ngoku, iimveliso zethu ziquka ukuhambisa izixhobo, izixhobo zokucoca, izixhobo zokugaya umgubo, njalo njalo. Baye babonwa liqela labathengi ekhaya nakumazwe aphesheya.
Inkampani igxile kuhlaziyo lwetekhnoloji, ekuphuculeni ubuchule bokuvelisa kunye nomgangatho womatshini. Inkampani iye yakhokela ekwazisweni komatshini wokusika we-CNC we-CNC, umatshini wokugoba we-CNC, i-CNC lathes kunye nezinye izixhobo zokuqhubela phambili.
Ngexesha elifanayo uthenge iziko loomatshini be-CNC, umatshini we-CNC okruqulayo, umatshini we-CNC, umatshini womphezulu, umatshini wokukhwela kunye nezinye izixhobo zokuqhubela phambili zotyalo-mali, kwaye wongeza umgca wokuvelisa ukutshiza kwe-electrostatic. Umgangatho wemveliso unokuthenjiswa zezi nkxaso zezixhobo zokuvelisa zinokuthenjwa.
Inkampani yethu yamkela ipleyiti yentsimbi yokusika umatshini wokusika, i-CNC yokugoba umatshini, i-carbon dioxide arc welding kunye ne-argon arc welding, isikali se-welding, i-rotary welding ezenzekelayo, unyango lokutshiza ngombane, ukuphucula okuqhubekayo kunye neemodeli ezintsha. Iimveliso zethu azisebenzi kakuhle kuphela, kodwa zilula ukufakela kunye nokugcina ngexabiso eliphantsi. Imveliso enobuchwephesha obuphambili, umgangatho onokuthenjwa, kunye nokubonakala okuhle kuye kwanconywa ngabathengi abaninzi.